Akwụkwọ ga-agụ na awa ole na ole | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Na ị nweghị oge agaghịzị abụ ihe ngọpụ zuru oke iji kwuo na ị naghị agụ. Anyị akwadebewo ndepụta maka gị ma ọ dịkarịa ala Aha akwukwo 5 ukwuu na ị nwekwara ike gụọ na awa ole na ole. Kachasị ọ ga - ewe gị n’ehihie. Ọ bụ ederede zuru oke iji gụọ ugbu a na ngwụsị izu mgbe anyị nwere ezumike awa ole na ole n'ụbọchị.
1 Ha ga-akpọrọ gị obere oge ... will ga-a themụ ha!
1.1 "November" nke Gustave Flaubert, dị mma maka ihe kachasị nwee ịhụnanya
1.2 "Antichrista" nke Amélie Nothomb, maka ihe kachasị njọ na ihe dị egwu
1.3 «N’enyeghị ozi ọma site na Gurb» nke Eduardo Mendoza dere, maka ọnụ ọchị kachasị
1.4 "Nnupụisi nke Ugbo" nke George Orwell, maka ndị chọrọ ịghọta ndọrọ ndọrọ ọchịchị ugbu a ntakịrị ka mma
1.5 "Ọzọ uzo nke ịghasa" site n'aka Henry James, maka ihe na-emenye ụjọ ma dị egwu
Ha ga-akpọrọ gị obere oge ... will ga-a themụ ha!
"Nọvemba" nke Gustave Flaubert, dị mma maka nke kachasị ịhụnanya
Nkọwapụta: Flaubert dere na Nọvemba 1842, mgbe ọ gbara afọ iri abụọ. Echere akwụkwọ akụkọ nke mechiri mmepụta nke ntorobịa Flaubert (nke ọrụ a na Ncheta nke onye nzuzu akara), anyị na-eche ihu ziri ezi bildungsroman, akwụkwọ akụkọ ịtụnanya nke nnabata ịhụnanya, nke na-enyocha usoro aghụghọ. ụkpụrụ nke ihe na-akpali agụụ mmekọahụ na ịkwa ụta nke mmekọrịta ịkwa iko na nke mmekọrịta mmadụ na ibe ya. N'ime akwụkwọ a, na-eri ahụ ịgụ, na njem na-enye obi ụtọ na mbuli elu, nwa nwoke, nke anyị nwere ike ịhụ Flaubert n'onwe ya gosipụtara, na-atụgharị uche n'oge njem mba na ụmụ nwanyị (gụnyere Marie, nwanyị akwụna ahụ ọ malitere na nzuzo nke anụ ahụ , nakwa na ọ bụ, na akụkụ hà nhata, "nwanyị mmụọ ozi na nke a na-apụghị ịkpa aghara, na nwanyị na-egbu egbu nke ji egbe na-ebibi ebibi" n'okwu nke Lluís Mª Todó). Ọ ga-abụrịrị na ọnwa Nọvemba bụ ezigbo akụkọ ihe mere eme nke ịhụnanya, ya na nwa agbọghọ Flaubert dị ka onye mbụ. Akwụkwọ akụkọ a, nke Flaubert na-ebipụtaghị n'oge ndụ ya mana nke ọ na-ahụkarị n'anya pụrụ iche, bụ nkenke nka nke ụwa nke ịhụnanya, na-enyocha oke agụụ na nhụjuanya metụtara ya, bụ onye omimi nke mmụọ na-egosipụta ụdị ọrụ ọrụ n'ọdịnihu. Kedu "Nwanyị Bovary" o "Sentimental mmụta".
Ọnụọgụ nke ibe: 144.
"Na-emegide Kraịst" nke Amélie Nothomb dere, maka ihe kachasị njọ ma dị egwu
Kedu ihe ọ bụ? Blanche zutere Christa na Mahadum Brussels. Ha abụọ dị afọ iri na isii, Blanche bụ onye owu na-ama, onye ihere na onye na-enweghị nchebe, Christa na-atụgharị uche na talent ya maka ịrafu mmadụ na enweghị isi. Nzukọ nke ndị a nwere ike iduga ọbụbụenyi na-adịgide adịgide, mana ọ ghọrọ ụzọ na-egbu mgbu nke nhịahụ, mmegbu na mmechuihu nye Blanche, onye kpebiri inupụ isi. Antichrista, ihe nhụsianya banyere nsogbu nke mmetụta uche nke oge uto na ntụgharị uche banyere adịghị ike, nhụjuanya na atụmanya nke ala mmadụ ahụ nke dị n'etiti nwata na ntorobịa.
Ọnụọgụ nke ibe: 131.
"Ọ dịghị ozi si gurb" nke Eduardo Mendoza dere, maka ọnụ ọchị kachasị
Arụmụka: Akwụkwọ ahụ na-akọghachi ọchụchọ maka onye ọbịa (Gurb) nke furu efu, mgbe ọ nakweere ọdịdị nke Marta Sánchez, na obodo Barcelona. Onye na-ede akụkọ ahụ abụghị Gurb, kama ọ bụ onye ọbịa ọzọ nke na-esote ya mgbe ọ ghọsịrị Count-Duke nke Olivares, ọ bụ ezie na ọdịdị ya gbanwere ka atụmatụ ahụ na-aga n'ihu, na-aghọ ihe odide dịka Miguel de Unamuno, Paquirrín, Isoroku Yamamoto, Duke nke Kent ma ọ bụ Alfonso V de León, onye akwukwo ya bu ntuziaka nke akuko. Onye protagonist na-amalite akụkọ na echiche na ebumnuche ndị na-agbanwe ka ọ na-agbanwe ka ọ gbanwee ndụ nke ụwa. Uzo nke akuko a bu nzuzu na otutu okwu. Onye ode akwukwo mere ka obodo nzuzu na kwa ubochi di ka ebe ana eme nghughari nke n’egosiputa ezi mmadu ndi bi n’obodo mepere emepe ma na eme ka onye dere akwukwo mara ihe.
Ọnụ ọgụgụ peji: 143.
"Nnupụisi n'ugbo" nke George Orwell dere, maka ndị chọrọ ịghọta ntakịrị mma na ndọrọndọrọ ọchịchị ugbu a
Synopsis: Amamikpe nke ọha mmadụ aka ike, nke na-eju anya na akụkọ ifo. Animalsmụ anụmanụ ndị dị n'ugbo Jones na-ebili megide ndị nwe ha ma merie ha. Ma nnupụisi ahụ ga-akụ afọ n'ala dị ka asọmpi na ekworo na-ebilite n'etiti ha, ụfọdụ na-ejikọkwa onwe ha na ndị nna ukwu ha kwaturu, na-emebi aha ha na ọdịmma nke klaasị ha. Ọ bụ ezie na a na-atụle nnupụisi Farm dị ka mkparị obi ọjọọ nke stalinism, njirimara zuru ụwa ọnụ nke ozi ya na-eme ka akwụkwọ a bụrụ nyocha pụrụ iche banyere nrụrụ aka nke ike na-eweta, onye iwe iwe dị egwu megide ọchịchị aka ike nke ụdị ọ bụla, yana nnyocha dị mma banyere njikwa nke eziokwu akụkọ ihe mere eme na-agbanwe n'oge mgbanwe ọchịchị.
Ọnụ ọgụgụ peji: 144.
"Ọzọ gbagọrọ" nke Henry James dere, maka onye kasị nwee ụjọ na onye na-achọsi ike
Arụmụka: Otu nwanyị na-elekọta ụmụaka na-elekọta ụlọ ochie nke Victorian. Ihe dị na mbụ dị ka ọrụ dị ụtọ ga-agbanwe n'ọnọdụ nro. Mụaka nwere mmetụta site n'oge gara aga nke onye ọchịchị gara aga, Miss Jessel, na Peter Quint, onye na-elekọta onye nlekọta na valet (nwanne nna ụmụaka) nwere mmekọrịta dị egwu. Enwere ike iche na mmejọ ụfọdụ mere. Ndụ nke onye ọchịchị ahụ na ọnwụ ya sochirinụ ahapụla akara na-agaghị echefu echefu. Onye na-akwado akụkọ ahụ, mgbe ọ na-anwa inyere ụmụntakịrị aka, na-amalite ịghọta ọhụụ nke ghosts nke onye ọchịchị gara aga, onye nwụrụ na ọnọdụ ndị ọzọ, ụmụaka na ndị isi na-agafe ha.
Ọnụọgụ nke ibe: 204.
Anyị na-emesi gị obi ike, ihe ọ bụla ị họọrọ bụ, a ga-akpọtụrụ gị ma ị ga-emecha ya n’ime awa ole na ole. Oge a adịghị egbochi gị ịgụ akwụkwọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » Akwụkwọ » Akwụkwọ na-agụ na awa ole na ole